Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula 'ilanga ", iqabane iimvakalelo?
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula 'ilanga ", iqabane iimvakalelo?
Xa "ilanga" ikhadi reverse ukuma 'kwelanga' kwinkqubo
umsebenzi ka-3500 yen 'ithamsanqa-mathamsanqa ukufumana apreyizali simahla ikhadi elungileyo kakhulu, okanye ulinde nekamva eliqaqambileyo, yintoni ithemba yinto yokwenene okanye abe, kunokwenzeka ukuba ukubhiyozela imeko abonwabileyo, kukho ukuqonda kokuba.
e ikhadi ezithandwa nje phambi kokuba impumelelo izinto ezinkulu, okanye kwafunyaniswa ukuba nexhala ke ukuba uthando abe iimvakalelo abathandanayo bakhe, okanye yena Okuqhotyoshelwe apha kum Sicebisa ukuba isigqibo ukutshata, ukongeza, njengoko kufuneka ukuba zazise ngokwam ukuya kwindawo kunye nosapho, oko kwenzeke bonwabile.
kwisikhundla esihle iimvakalelo elinye qela
indawo ezintle "kwelanga" ibimele ukuba lithetha "ilanga" kukuba, oko kuthetha ukuba izinto inkqubela phambili kwicala elungileyo kakhulu kum. Imeko ukuba sihlale phantsi esitalini, ezifana imbandezelo okanye ukusilela isonjululwe, uya kubona imiqondiso eliqaqambileyo de ukufezekisa le njongo. Nabani na kulwalamano, ngoko kusenokwenzeka ukuba isindululo, kuya kubakho uvumo kumntu lowo Ndandicinga ukuba uthando ezingabuyekezekiyo kude kube ngoko. Ekubeni
iimvakalelo zakhe zijonge ngokucacileyo kuwe, yilo okumiselwe ithuba eliphezulu nempumelelo enkulu kwanokuba indlela sendide kwabo siqu. Oku kubalulekile ukugcina isiphelo, kunye ukonwabela nokusingqongileyo eliqaqambileyo inikwe ukubheka phambili yonke imihla, ukuze nayo elikhulu emhlabeni ulonwabo lwabo, sicebisa ukuba siwazise uncumo.
kwisikhundla esihle loo mntu umva indawo uthathwa ukuba intsingiselo 'ilanga "kunye nentsingiselo elungileyo kakhulu positive" ilanga ", yaye iya kuphuma kwindawo umva, ukubonakala meko ukuba kubi kakhulu, okanye nkqubela ngaphezu kakhulu, nto imele ukuba meko kungenzeka ukuba phambili kwicala netyhafisayo.
ukuphumeza injongo nethemba Okanye indlela inde kakhulu, nathi kungenzeka kwakhona efihliweyo ukuba umqobo enkulu kubonakala endleleni. Nokuba kubonakala bonwabile evela kwabanye, engqondweni yam uthotho nomonde, ukuze wena ube nomonde ndinikezele ukuze xesha lide, kukho isiganeko ezifana ilahla isithunzi ikamva labantu ababini kusenokuba.
Ukuba ufumana eli khadi, le ezibonakala iimvakalelo zakhe azive ngathi ijonge kuni, ngumqondiso ukuba inxalenye ebalulekileyo ujonge komnye. Ekubeni kunzima ukuhamba kakuhle nokuba wavuma ukuba uthando lwakhe ezingabuyekezekiyo, kucetyiswa ukuba bakhonze ukugcina ubuhlobo yangoku. Ukongeza, umntu ngubani na ku rhandzana, ukuqalisa ukuba ibali komtshato kuya kuba ngcono ukuba ulinde kancinane. Ukuba imizamo yenziwe ukuphuhlisa ulwalamano lwabo, ukuze inokunxulunyaniswa reverse uya kwaphulwa.